မတူပီမြို့၊ ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီမှူးရုံး ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ - Matupi Times Olthang
မတူပီမြို့၊ ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီမှူးရုံး ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ချင်းပြည်နယ်၊မတူပီမြို့နယ် ကျေး လက် ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန ရုံးသစ် ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားကို (၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ညနေ (၃း၀၀)တွင် ကျင်းပရာ ပြည် နယ်လွှတ်တော်အမတ် ဦးအောင်လျန် ၊ပြည်နယ် ဦးစီးမှူး ဦး ကြည်စော၊ ဒု ပြည်နယ် ဦးစီးမှူး ဦးတမ်အောင်၊ ခရိုင် ဦးစီးမှူး ဦး ကျော်ကျော် နှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော် တို့မှ အသီးသီး ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ကြပါသည်။
အဆိုပါမြို့နယ်ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲကိုဂုဏ်ပြုဆိုသောအားဖြင့်လူထုဗဟို ပြုကိန်းမှ သတင်း ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေး အစီအစဉ်ဖြင့်In formationCampaignဓါတ် ပုံပြပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊မြို့မိမြို့ဖများ၊စည်ပင်ကော်မတီဝင်များ၊ကျေးရွာရှိကော်မတီဝင်များ၊စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ကျေးလက်ဝန်ထမ်းများ၊မတူပီယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ တက်ရောက်ရှိပါသည်။အခမ်းအနား ကို တက်ရောက်လာသည့်ကိုယ်စား လှယ်များ သည်စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မဲနှိုက်ပြီးမေးခွန်းမေးမြန်း ခြင်း ကျင်း ပရာ မေးခွန်းဖြေကြားနိုင်သူများကို စီမံကိန်းတံဆိပ်ပါ ဦးထုပ်၊ တီရှပ်၊ မိုးကာအင်္ကျီ၊ ကျော ပိုးအိတ် ၊ စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာအုပ်၊လက်ကမ်းစာစောင်များကို ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိ ရပါ သည်။
Matupi peng ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး yung thai ong nah tah Novem­ber 26, 2019 hlamben 3:00 (PM) lam kah lohatong u tih 5:00pm hil ah atue ah hno na uh. Lamhma cuek la kho nu kho pa na loh singyoe lamla neh hutnah aka­khueh kung boei na teadoe uh. Te coengah yung im thai sak nah ham ahmuen molaka pae kung Pa Lung Pan taeng ah uem nah kut doe te om ngaih ca laapaek uh.Te phoei ah Pairhui (ဖဲကြိုး) ah nah atue atong uh. Pairhui (ဖဲကြိုး) ka at ham la Chin Pyi Ne Hlawt Daw Kocalae U Aung Lian, Chin Pyi Nae ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်ရေး
yung lam kah Pyi Nae Ucihmu U Kyi Kyaw, Chin Pyi Nae ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး yung lam kah ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတမ်အောင်, Mindat Khayaing ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး yung lam kah Khayaing ဦးစီးမှူး ဦး ကျော်ကျော်, matupi myot Nae GAD ဦးအောင်မြင့်ကျော် ti loh Pairhui (ဖဲကြိုး) ah nah neh Matupi peng ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး yungaong uh.Te phoei Matupi peng ကျေးလက်ဒေသဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး peng Ucihmu yung Catai (ဆိုင်းဘုတ်) te botui nehahaeh u coeng ah mingpha nah mueihlip te aloh uh thatue abawt sak uh.
Singyoe ben kah lam nah akahut nah Pa Rhing Hl;in neh ahui rhoek tah Matu Yusuk la te asak uh. Tevaeng ah Yinla akalo boeih khaw yut yut alam puei uh. Yinla akalo rhoek long klhaw om ngaih kut doe tangka khaw apaek uh. Hlaem buh te khaw akok uh. (Ol puei la ol uen na ah ram neh hlang phun ham bibi vaeng ah ngai thue naneh bisai ham tila auen.